တရုတ် LVT ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (Online Lamination) ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |Jiahao
LVT ကြမ်းပြင်သည် သန့်စင်ပြီး PVC နှင့် ကျောက်မှုန့်များကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေးမြင့် ကြမ်းပြင်ကို အသုံးပြု၍ ပုံနှိပ်အလွှာ၏ လက်တွေ့ဆန်သော ပုံစံများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်ကို အလွန်ခိုင်ခံ့စေသော ၀တ်ဆင်မှုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ - ခံနိုင်ရည်ရှိသော PVC ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအလွှာအကာ၊ အောက်ခြေစလစ်ဖလင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ လုပ်ငန်းစဉ်များစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်ပြီး၊ UV အပေါ်ယံအလွှာအပြင်၊ အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကို ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်သည် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့် လှပသောမျဉ်းများရှိကြောင်း၊ elastic၊ သက်တောင့်သက်သာ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် အသံစုပ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားစွာ ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ မြန်ဆန်ပြီး ရိုးရှင်းသော ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြား အားသာချက်များ။
LVT ကြမ်းပြင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် LVT ကြမ်းပြင် extrusion line ၏အားသာချက်များ
1. LVT ကြမ်းပြင်တွင် အသုံးပြုသည့် အဓိကကုန်ကြမ်းများမှာ polyethylene ပလပ်စတစ်နှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမဟုတ်သော ကျောက်မှုန့်များကို ရွေးချယ်ထားသည်။PVC သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး အဆိပ်မရှိသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ၊ ဆေးပြုတ်ရည်အိတ်စသည်ဖြင့် လူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထည့်သွင်းထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အဆိပ်အတောက်မရှိသည့်အပြင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုလုံးဝမရှိပါ။ဒါကြောင့် LVT ကြမ်းခင်းဟာ တကယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး အစိမ်းရောင်ကြမ်းခင်းပါ။
2. ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်အောင် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော LVT ကြမ်းပြင်သည် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြေပြင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်၊ ကော်အခမဲ့ LVT ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံးကို နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မြေကြီးအရင်းအမြစ်များနှင့် ဂေဟဗေဒပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် LVT အလွှာကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
3. အလွန်ပေါ့ပါးပြီး အလွန်ပါးလွှာသော LVT ကြမ်းပြင်သည် 4-5 မီလီမီတာသာထူပြီး သာမန်ကျောက်ကြမ်းခင်းပစ္စည်းများ၏ 20% ထက်နည်းသော အလေးချိန်သည် တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 8-11 ကီလိုဂရမ်သာရှိသည်။အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများတွင် ဝန်ထမ်းနှင့် နေရာချွေတာခြင်းအတွက် ယှဉ်နိုင်သော အားသာချက်များရှိသည်။
4. ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသော LVT ကြမ်းပြင်၏ မျက်နှာပြင်တွင် မြင့်မားသောနည်းပညာဖြင့် လုပ်ဆောင်ထားသော အထူးအကြည်ရောင် ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည်ရှိသော အလွှာတစ်ခုရှိသည်။ထို့အပြင်၊ မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော coating ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ၎င်း၏ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်တော်လှန်ရေးအရေအတွက်သည် 20000 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အလွန်ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် LVT ကြမ်းပြင်သည် လူစည်ကားသောနေရာများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများနှင့် စူပါမားကတ်များတွင် ပို၍ရေပန်းစားလာပါသည်။
LVT ကြမ်းပြင် extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် အေးသော၊ မာကျောသော၊ မီးခိုးရောင်၊ စိုစွတ်ပြီး ဆူညံသော ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ဤထုတ်ကုန်သည် မီးလောင်လွယ်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းရန် မလွယ်ကူပါ။ထို့အပြင် ထုတ်ကုန်ခြောက်ခု၏ အခြေခံပစ္စည်းများမှာ တစ်ထောင်အောက် ကျုံ့သွားသည့် မှန်ဖိုက်ဘာဖျာများဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အလွှာကို အထူးဖန်တီးထားသည်။ထို့ကြောင့်၊ ၎င်း၏ ဆန့်ထွက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆံပင်ကောက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျုံ့ဆန့်နိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရေစိုခံ နှင့် အနာခံနိုင်ရည်၊ ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်စသည်ဖြင့် ယက်မရှိသော အထည်များ၊ စက္ကူ သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပလတ်စတစ်များကို အခြေခံပစ္စည်းများအဖြစ် စျေးပေါသော ကြမ်းပြင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်မှာ အရည်အသွေးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ပိုကောင်းပါတယ်။နှစ်များတစ်လျှောက် Jiahao ထုတ်ကုန်များသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိပြီး ရုရှား၊ စပိန်၊ တူရကီ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ဂျာမနီ၊ တောင်အမေရိကနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများထံမှ ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။Jiahao တွင် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ R&D၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ကော်မရှင်ပေးခြင်းနှင့် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ရင့်ကျက်သောအဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး ပဏာမဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု၊ အစီအစဉ်သရုပ်ပြမှု၊ အစီအစဉ်ဒီဇိုင်း၊ စက်ကိရိယာများခန့်အပ်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်သည် စက်ကိရိယာ လည်ပတ်လေ့ကျင့်ရေး စသည်တို့၊
ယခင်- WPC Cabinet ပရိဘောဂဘုတ်လိုင်း
နောက်တစ်ခု: PBM သဘာဝအမျှင်ဓာတ်ဖြည့်သွင်း WPC ဘုတ်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း
Spc Flooring ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း